70 taona niahiana ny sosialy sy ny ara-panahy
Ankaramalaza, tanàna kely ao amin’ny fivondronan’i Lokomby, kaominina ambanivohitra Ivatana, faritra Vatovavy Fitovinany, itoeran’ny mponina miisa 2 000. Tanàna mampahatsiahy izay volazan’ny Baiboly fa bitika kanefa nipoiran’ny famonjena. Lasa Tobilehibe Ankaramalaza io tanàna io ankehitriny noho ny fahagagana nisy tao 70 taona lasa izay. Nampiasa vehivavy iray Andriamanitra hanehoany ny fisiany, ny heriny sy ny voninahiny.
1941 : Teo amin’ny faha-18 taonany i Volahavana Germaine izay nantsoin’ny teo an-tanàna hoe Nenilava. Lava sady ranjanana ny tovovavy : 1,90 metatra , refy tsy fahita eto Madagasikara raha vehivavy no lazaina. Nahagaga fa io vehivavy io no nampiasain’Andriamanitra tamin’ny fanasitratrana. Nisy tovovavy kely nampahorian’ny demonia. Nifandrombonan’ny evanjelistra teo an-tanàna ny fandroahana izany fanahy maloto izany. Mba nizahazaha teo koa i Nenilava ary naheno feo nibitsika hoe “Nahoana ianao no tsy miasa fa mitazam-potsiny”. Vantany vao nahare io feo io ity farany dia nahatsapa fa nisy hery nanosika azy ka nitsipika teo ambonin’ilay tovovavy ny tenany ary vao niteny hoe “Mialà amin’ny Anaran’I Jesoa Kristy ianao”, ary niaraka tamin’izay dia niova ny toe-tenan’ilay vehivavy io rehefa nisy fifampikasohana io ary sitrana tanteraka izy ny 2 aogositra 1941. Somary nanahirana ny be sy ny maro ihany ny fahitana ilay fahagagana kanefa nanomboka teo ny asam-pamonjena nataon’I Nenilava mahakasika ny nofo sy ny fanahy.
1960: Neken’ny fitondram-panjakana Malagasy ny “Hospice d’Ankaramalaza”. Toerana nandraisan’I Nenilvava ny kamboty, ny zokiolona, ny olona miaina anaty fahasembanana izay nahiliky ny havany io “hospice” io. Tao no nikarakarany sy nanomezany indray ny hasina maha-olona. Napandroso ny resaka sosialy Nenilava ary tsy ambanin-javatra ny ara-panahy. Marihina fa Jesoa Kristy mihitsy no maneho vina aminy ka io no tanterahina.
1969: Nijoro ny fikambanana “Manolotsoa”. Io no nikarakara ny tetikasan’ny Toby ka nifandray betsaka tamin’ny fitondram-panjakana Malagasy sy ny misionera norveziana izay nanohana ara-bola.1970: Fantatry ny olona ny hoe Toby Lehibe Ankaramalaza. Naorina ny fiangonana satria tsy navela ho an’I Nenilava irery ny asa. Natsangana koa ny sekoly, ny toeram-pitsaboana ary efa misy ihany koa ny sekoly biblika mpanofana katekista, izay Jesoa Kristy mihitsy no nibaiko an’I Nenilava hanorina azy.
1979: Tapitra teo ny fanohanana ny Toby. Nijoro kosa ny Tobilehibe Ankaramalaza. Izy indray no lasa nandray an-tanana ireo karazana tetikasa fampandehanana ny Toby. Lasa toeram-panokanana sy toeram-pivavahana Ankaramalaza fa tsy toera-mpiasan’ny mpiandry akory. Efa mahatratra hatrany amin'ny 10 000 mpiandry tany ho any no notokanana tao amin'ny Tobilehibe Ankaramalaza.
2011: Feno 70 taona ny Tobilehibe Ankaramalaza.Amin’ny 2 aogositra ho avy izao ny fankalazana. Manokana herinandro ny komity hamroiana ireo Malagasy manerana ny Nosy. “Fotoana sarobidy io fihaonana io satria sehatra ifanakalozana, ifampivavahana, ifanampiana ary andraisana andrikitra. Fanararaotana ihany koa ho an’ny mpivarotra hampiroboroboana ny famokarana ataony eo amin’ny lafiny rary, sakafo ary ny maro hafa koa. 25 000 any ho any ny mpizaika sy mpitsidika andrasana. Misy araka izany ny famoronana asa ho an’ny mponina amin’ny famahanana sy ny fifamoivoizana satria miampita lakana vao tonga. Tsy adino ihany koa ny fieritreratana ny hafa mandritra io fotoana io amin’ny alalan’ny fifanampiana izay mety hiseho amin’ny endrika samihafa”, hoy Andreas Richard, tonian’ny Toby nanazava. Ho entitra ihany koa ny fiarovana ny olona sy ny fananany amin’io fotoana io satria hamafisina ny fandriampahalemana. Eo anelanelan’ny 8 ora 30 maraina ka hatramin’ny 9 ora alina ny fotoana ary rehefa mipaika ny 11 ora alina dia tsy azo ivezivezena intsony ny tanàna. Aorian’ny fankalazana dia fananganana tranom-bakoka no heverin’ny komity hotanterahina. Nanamafy hatrany ny tonian’ny Tobilehibe Ankaramalaza fa fomba iray hitahirizana ny tantaran’i Nenilava, ny trano fonenany, ireo fitaovana nampiasainy ary ny tantaran’Ankaramalaza io tsangam-bato io. Ahiana mantsy ny hivilian’ny tantara rehefa ao aoriana kely ao raha sanatria ka tsy voarakitra izany rehetra izany.
Ho fanampin’izay, maniry ny komity ny hisian’ny lisea ao an-toerana satria efa tafajoro soa aman-tsara ny ambaratonga voalohany sy faharoa fototra ka hiezahana ny handrantoan’ny ankizy sy tanora fianarana tsy lavitra ny trano fonenany. Tsy ho diso anjara ireo rehetra mandeha any Ankaramalaza satria ho tsara karakara avokoa na ny vatana na ny fanahy. Santionany ny “fanasan-tongotra” izay fomba fandraisana vahiny avy lavitra. Diovina aloha ny vahiny vao avela haka aina sy hisakafo.